Si looga hortago timo Daadashada .. Cuntadu sameyn ma ku yeelan kartaa? – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Si looga hortago timo Daadashada .. Cuntadu sameyn ma ku yeelan kartaa?
Si looga hortago timo Daadashada .. Cuntadu sameyn ma ku yeelan kartaa?
Caadooyinka cunnooyinka aan caafimaadka qabin waxay sababi karaan waxyeelo aan loo baahnayn. In kasta oo ay jiraan astaamo badan oo caan ah oo nafaqo-xumo ah, oo ay ku jiraan miisaanka oo kordha iyo finanka, waxaa sidoo kale jira saameyn kale oo naxdin leh oo dad badani aysan ogayn inay timo lumayso ama daadiso.
Chris Varuna, oo ah khabiir dib u soo celinta timaha, ayaa Hollywood-ka u sharraxay sida cuntadaadu u saamayneyso koritaanka timahaaga iyo waxa aad cunayso si looga hortago in ay daataan oo aad nolol caafimaad u horseedo.
“Timaha oo daata, iyadoo aan loo eegin sababta, waxay saameyn ku yeelan karaan nolosha dadka,” ayuu yiri Varuna.
Haweenka, waxaa jira arrimo badan oo horseedi kara timo lumis, badanaana waxaa jira arrimo badan oo gacan ka geysan kara timo luminta, dabcan haweenku waxay lahaan karaan dhaxalka luminta timaha.
“Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah yaraanta fitamiinnada, yaraanta birta dhiig la’aanta, timo Daadashada oo ay keento walaaca iyo cilladaha qanjirka tayroodh, ama alopecia timaha qaarkood ama timaha daran ee jirka u horseeda gubashada maqaarka.
Varuna, oo sidoo kale ah milkiilaha shirkadda dib u soo celinta timaha ee Newport Beach, California, ayaa shaaca ka qaaday sababta aad ugu baahan tahay inaad wax ka beddesho cuntadaada.
Xaaladaha badan, haddii wax ka qabashada cilladaha cuntadu ay wax ka qabato, timo luminta ayaa joogsata. Marka la eego nafaqada iyo timaha caafimaadka qaba, cuntada Mareykanka ayaa sida caadiga ah daboosha aasaaska. Si kastaba ha noqotee, iska hubi in cuntadaadu ay ku jirto magnesium, biotin, zinc, iron iyo vitamin, Tani waxay gacan ka geysan kartaa sii wadida awoodda iyo mugga timaha. “
Qaar ka mid ah nafaqooyinka ugu muhiimsan ee ay kala duwan ‘Varuna waxay sharrax ka bixinayaan inay lagama maarmaan tahay si looga hortago timo lumis. Kuwaas waxaa ka mid ah aashitooyinka dufanka leh ee loo yaqaan’ acids fat ‘.
Walnuts, miraha chia, flaxseed iyo soy sidoo kale waa ilo wanaagsan oo nafaqo timo leh.
Fiitamiinadu waxay kaloo caawiyaan sameynta unugyada dhiiga cas, kuwaa oo u qaada oksijiinta iyo nafaqada gunta madaxa iyo timaha. Waxa kale oo aad ka heli kartaa fiitamiin B6 mooska iyo baradhada, B12 hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyay, folic acid oo ku jirta liinta iyo yaanyada.
Isla mar ahaantaana, fiitamiin D-gu wuxuu hayaa maqaarka caafimaadka leh, lafaha iyo timaha. Daraasadaha qaarkood waxay la xiriiraan yaraanta fiitamiin D-ga iyo timaha, halkaas oo aad ka heli karto fiitamiin D-ga kalluunka dufanka leh, beerka, beedka beedka iyo cuntooyinka adag sida caanaha.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo “oo khudbad ka jeediyey fadhi gaar ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya”
Next articleDegniin:Gobolka Mareykanka oo mamnuucay sigaarka elektiroonigga ah “ka Taxadar”